Iindaba -Ukusika okukhulu umatshini wokusika we-laser oza kufakwa eSingapore
Ubungakanani obukhulu bokusika umatshini wokusika we-laser ukuba ubekwe eSingapore
Yimodeli yesiko lesiphelo esiphakamileyo, lo matshini ubungakanani beebhentshi lokusika olusebenzayo
I-3000 * 12000 mm, izixhobo zokuqala zomatshini ezikhulu zomzi mveliso kunye nenkqubo yokwenza ixesha elinye, isisombululo sobuchwephesha bokuchaneka kwesixhobo somatshini omkhulu ngenxa yeengxaki zokulungiswa kwamacandelo amaninzi, umthengi wanelisekile zizisombululo zethu zelaser kunye nomsebenzi oqeqeshiweyo emva kwenkonzo yokuthengisa, uthathe isigqibo ukuthenga amandla aphezulu angama-15000W e-fiber laser cutting machine kwi-SUNTOP ngexesha elizayo.
Kwi-Okthobha egqithileyo, iSeshini yesiHlanu yeNkulungwane ye-19 CPC Central Committee iphelile. Iseshoni yamalungu onke yenza isicwangciso esibanzi sokuphuhliswa kwe China ngexesha le "14th isicwangciso seminyaka emihlanu", kwaye ichaze injongo yexesha elide ka 2035. Oku kubonisa ukuba, ukusukela kunyaka ozayo, iChina izongena kwinqanaba elitsha lophuhliso, kwaye elitsha Ingqondo yophuhliso iya kuphunyezwa ngakumbi, kunye nepatheni entsha yophuhliso enomjikelo omkhulu wasekhaya njengoyena mzimba uphambili kunye nasekhaya nakwamanye amazwe osasazo olukhuthazanayo kufuneka lwakhiwe.
Kwinqanaba elitsha lophuhliso, umxholo wophuhliso omtsha kunye nepateni entsha yophuhliso, ukuvulwa kuhlala kudlala indima ebalulekileyo. Umboniso wesithathu we-China International Expo wabanjwa emva kweSeshini yesiHlanu yePlenary ye-19 yeKomiti ePhambili yeQela lamaKomanisi lase China. Iyaqhubeka ukubhengeza ulwakhiwo lwentaba entsha yokuvula, ukukhuthaza uphuhliso olutsha kurhwebo lwangaphandle, ukuqhubeka nokwandisa imeko yezoshishino, kunye nokomeleza intsebenziswano yamazwe amabini, yamazwe kunye neyommandla. La manyathelo mane matsha yimibhalo esemazantsi yokubonisa ukuvulwa kwamanqanaba aphezulu kwiNdibano yesihlanu yePlenary yeKomiti ePhambili ye-CPC ye-19.
"Umnyango wokuvula uza kuvulwa ngokubanzi kwaye ubanzi" kukuzibophelela okungagungqiyo kwe China. Isindululo esiqhubekayo samanyathelo okuvula sibonisa ukuba ukuvulwa kwe China kudibene ngokusondeleyo kunye kwaye kuyaqhubeka. Ihlabathi liyakubona ukuzithemba, ukuzimisela kunye nokuzingisa kokuvulwa okuqhubekayo kwe China.
"I-China izakuwandisa ngokungathandabuzekiyo ukuvulwa kwayo ngendlela ejikelezayo, ukuze intengiso yaseTshayina ibe yintengiso yehlabathi, intengiso ekwabelwana ngayo kunye nentengiso yomntu wonke, kwaye ifake amandla angakumbi kuluntu lwamanye amazwe." Amazwi kaMongameli Xi Jinping axelele umhlaba ukuba "ukuvula" sisiseko esingabalulekanga. Kungenxa yokuba kukho amashumi amawaka eemvelaphi "ezivulekileyo" emhlabeni. Ukuthembela kwintsebenziswano kunye nokusebenza kunye, imephu yezoqoqosho yehlabathi inika icala elityebileyo nelimbala. Kwisithunzi semephu yezoqoqosho kwihlabathi, i-China iqhubeke ibhengeza amanyathelo okuvula kwaye yacebisa ukuba onke amazwe asebenzisane ukukhuthaza ukuvulwa okuqhelekileyo kokuphumelela kwentsebenziswano, intsebenziswano kunye nolawulo lwentsebenziswano, oluchaza ukhetho lwase China "yokuma kwicala lasekunene lembali", nto leyo ebeka umzekelo kuwo onke amazwe ukuba avule ngokubambisana kwaye afake umbala oqaqambileyo kwimephu yezoqoqosho yehlabathi.
Ifayibha I-Laser Ukusika Umatshini, Ifayibha I-Laser Ukusika Umatshini, Tube Laser umsiki, Umatshini wokusika we-Fiber Laser, Umbhobho weFibre Laser umsiki, Ifayibha Laser Tube Ukusika Umatshini,